Gudoomiyaha Gobolka Shabeellaha Hoose oo dhagax dhigay dayactirka Buundada Degmada Qoryooley | Somali National Television - sntv.so
Home WARARKA MAANTA Gudoomiyaha Gobolka Shabeellaha Hoose oo dhagax dhigay dayactirka Buundada Degmada Qoryooley
Gudoomiyaha Gobolka Shabeellaha Hoose oo dhagax dhigay dayactirka Buundada Degmada Qoryooley
Buundada Degmada Qoryooley waxa ay muhiim u tahay isku socodka gaadiidka iyo dadweynaha qeybo ka mid ah gobolada dalka waxaana ka muuqda bur bur xoog leh buundada ma helin wax dayac tir ah sanado badan.
Maleeshiyada shabaab ayaaa dhowr jeer isku dayay in ay jaraan buundada si isku socodka gaadidka iyo dadweynaha ay u istaagan hasa ahaate maamulka degmada iyo dadka shacabka ah oo isgarbsanaya ayaa ka hortagay.
Guddomiyaha Gobolka Shabellaha Hoose ayaa dhagax dhigay buundada Degmada Qoryooley waxaana ku sugnaa goobta dhagax dhigista Maamulka Degmada iyo masuuliyin ka tirsan maamulka gobolka shabellaha hoose.
Gudoomiye ku xigeenka Amniga Degmada Qoryooley ayaa shegay in buundada ay dhisanthay sanado badan burburka ku yimidna ay sababtay in ay istaagan isku socodka gadidka iyo dadweynaha.
Gudoomiyaha Gobolka Shabellaha Hoose Mudane Ibraaahim Aadan Cali Najax ayaa Markii uu dhagax dhigay kadib la hadlay warbaahinta qaranka ayaa sheegay in buundada aysan in mudda helin dayactir maamulka gobolka shabellaha hoose uu bilaabayo dayactirka buundadan isagoo maamulada Degmooyinka Gobolka Shabellah Hooose ugu baqay in ay nabada iyo isdhaxgalka bulshada ay ka shaqeyan.
Gudoomiyaha Gobglka Shabellaha Hoose iyo masuuliyinti la socotay ayaa kormeeray biya xireen ku yaala Degmada Qoryoley iyadoo maamulka degmada Qoryooley Gudoomiyaha Gobolka warbixin ka siiyen sida uu u shaqeyo biya xirenka maamulka gobolka ayaa degmada qoryooley waxa uu ka hirgelinayaa leerarka ku shaqeya cadceeda si xiliyada habeenki u u shaqeyo ganacsiga iyo isku socodka dadka.
Previous articleHaweeneydii ugu horeysay ee duuliye ka noqoto Soomaaliya oo lagu soo dhaweeyay Muqdisho
Next articleRa’isulwasaare ku-xigeenka oo xariga ka jaray mashruuca balaarinta Dhageysiga Radio Muqdisho